Kachasị ikpere ubi
Ugbo nke ohia na - adi otutu na egwu ala na ikwuputa ahiri na ime ka ndi mmadu ghara idi ngbochu ha. Ọ na-akachasị mma ịnọ nso na omume gị, nke pụtara na n'ọtụtụ oge, a ga-achọ ka ị na-eduzi ọrụ ubi gị na akụkụ anọ niile. Nkwonkwo ikpere ochie na-adịghị eme ebere n ’ụdị ntaramahụhụ a, ọkachasị ma ọ bụrụ na ala ị na-arụ ọrụ ezughi oke, mmiri ma ọ bụ okwute, na onweghị ihe na-ewute ala ikpere n’ala na -ekwu okwu (ụzọ ndụdụ isi n’ụzọ na-adịghị mma. .
Maka ntụsara ahụ, nke dị n'obere ala (ịghara ikwu maka ichebe uwe gị pụọ na ụrọ) ọ bụ ikpere ịchọrọ, anyị na-anwale ihe kachasị mma, gụnyere ma ndị ikpere ụkwụ na-egbu egbu na eriri ụkwụ. Iji mee ka obi sie ikpere anyị ike Anyị na-atụ aro ndị ikpere na-enye ezi nchedo, na-adịgide adịgide ma na-ehichasị nke ọma mgbe otu ụbọchị ike gwụsịrị n'etiti ala.
Ihe mkpuchi a na-eme ụfụfụ bụ ọnụ ala dịka ibe. Ọ bụ ihe mmetụ aka dị gịrịgịrị, nwere nke na-adịghị agbanwe agbanwe, nke nwere ihe okike (dị ka ọmarịcha achịcha akwụkwọ nri), mana ọ na-arụ ọrụ dị mma nke idobe nri gị mgbe ị na-egbu ikpere n'ala na nkume - n'ezie, ọ nweghị ike ịsọ mpi nkasi obi nke nhọrọ di onu di na listi a. Ọ dị ọcha ma nwee ihe ọ ga - ebu mgbe ị na - achọgharị ubi ahụ. Okwu dị na nkwakọ ngwaahịa ahụ na-ekwu na ọ bụ “ka a ghara iji ya na-ese mmiri”, yabụ dọọ pusi gị aka ka iji ihe ikpere a mee ihe.
Nke a bụ ezigbo uru, onye na-eke ikpere mara mma nke nwere akwa mịrị amị nke dara okomoko nke na-enye ohere ịba ụba maka ịmegharị ikpere. Mgbe oke mmiri zoro ezo, onye na-amị ahịhịa a na-amị mmiri wee daa ngwa ngwa, dịkwa njikere maka ịme ihe n'èzí. Emere site na ụfụfụ EVA, kpuchie ya na neo Loose water, ọ dịkwa ọkụ, yabụ ị nwere ike idowe ya n'ofe nke ubi maka ndị na-elekọta ubi iji rụọ ọrụ ma ọ bụrụ na oku akpọlite. Ndi nwere ohia mara nma nke oma ndi maara ejiji mara na ndi n’eto ikpe a na abia n’ucha asaa, site na agba agba agba na acha odo odo.